လူနေမှုဘဝစတိုင်ကွဲပြားမှုကြောင့် မန်စီးတီးစတားဒိုင်ယက်စ်နှင့်ချစ်သူပေါ့စတားဧပြီအိုင်ဗီတို့လမ်းခွဲလိုက်ကြပြီ – Play Maker Sports Journal
ပေါ်တူဂီမဂ္ဂဇင်း FLASH! ကရူဘင်ဒိုင်ယက်စ်နှင့်ဧပြီအိုင်ဗီတို့ဟာလူနေမှုဘဝစတိုင်ကွဲပြားမှုနဲ့အတူလမ်းခွဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့အဆိုတော်ဧပြီအိုင်ဗီရဲ့အမည်ရင်းကမာရီယာနာဂွန်ကယ်ဗက်စ်ဖြစ်ပြီးသူမကိုယ်တိုင်ရေးစပ်သီဆိုထားတဲ့ Be Ok သီချင်းက ပေါ်တူဂီတွင်နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များကာနံပါတ်တစ်နေရာသို့ရောက်ခဲ့တဲ့သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။
ေပၚတူဂီမဂၢဇင္း FLASH! က႐ူဘင္ဒိုင္ယက္စ္ႏွင့္ဧၿပီအိုင္ဗီတို႔ဟာလူေနမႈဘဝစတိုင္ကြဲျပားမႈနဲ႔အတူလမ္းခြဲရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပတဲ့အဆိုေတာ္ဧၿပီအိုင္ဗီရဲ႕အမည္ရင္းကမာရီယာနာဂြန္ကယ္ဗက္စ္ျဖစ္ၿပီးသူမကိုယ္တိုင္ေရးစပ္သီဆိုထားတဲ့ Be Ok သီခ်င္းက ေပၚတူဂီတြင္နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူႀကိဳက္မ်ားကာနံပါတ္တစ္ေနရာသို႔ေရာက္ခဲ့တဲ့သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။
တစ်နာရီ ၃၂.၅ ကီလိုမီတာမြန်နှုန်းဖြင့် ပြေးကာ ဂိုးသွင်းပြီး စူပါလူသားဖြစ်နေဆဲလို့ ပြသခဲ့တဲ့ ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒို